Old Marketer maringe neNew Marketer. Iwe uri ani? | Martech Zone
Chitatu, September 23, 2009 Douglas Karr
Pandaiverenga nekumwe kutsvagisa kune iyo Alterian saiti, ini zvakaitika kune uyu wakanaka dhizaini pane yavo kusangana kwevatengi peji. Dhayagiramu yacho inonyatsoratidza mashambadziro zvachinja. Kuongorora uyu dhizaini, inofanirwa kujekesa kuti kushambadzira kwako kwakashanduka here kana kuti kwete.
Wakave wakashanduka seMarketer? Ane kambani yako?
Nhasi ndapedza nguva ne3 tarisiro dzakasiyana uye zvikonzero zvakajairika nei vasina kushanduka vaive kutya, Resources, uye hunyanzvi. Ini ndinofunga izvi zvinoratidza kuti nei zvichikosha kuchengetedza rubatsiro rwe online wekushambadzira wezano. Ivo vanokwanisa kupa yako yakasimba nezviyero zvinoyera uye nzira dzinoshanda dzekudzora zviwanikwa zvinodiwa… zvese uku uchidzora kutya.
Tags: adtsananguro yechiratidzocuralateemail kubatanakuwanda-kubataonline pamunhukwezvinhutekinoroji yekutengesasaiti kubatanidzwaWordPress
3 Zvikonzero zvekuhaya PR Firm
Sep 24, 2009 pa 11: 40 AM
Kushambadzira kwanhasi kunosanganisira zvakare inorema dhizaini yehunyanzvi nekuda kwenzira yekutaurirana yave chikamu chakakomberedza chenharaunda yedu. Zvese zve "mawrist watch vatakuri". vanhu vanopfuura makumi mashanu havana kugadzikana nehunyanzvi uye vachiri kusanzwisisa mablogging zvakanyanya kushambadzira tweeting uye zvimwe zvese zve 'zvinhu' zvinoramba zvichiuya kwatiri nekukurumidza. Sezvaunotaura, Doug, mupangamazano wepamhepo akakosha zvakanyanya uye ane mabasa makuru maviri nhasi: kudzidziswa uye kuvimbiswa .. Ipapo chete ndipo panotanga kutya.
Sep 24, 2009 na2: 44 PM
Handina chokwadi chekuti 'pamusoro pe50' kutaurwa ichokwadi zvekare, zvakadaro. Kukura kuri pamambure senge facebook varikuona kukurumidza kukura kune vanhu vakuru pane vadiki. Vechidiki vanokurumidza kutora, asi vanhu vakuru vanotora kana vachinge vaona kukosha kwacho. Ndine social network yeNavy Vets uko avhareji zera riri pamusoro makumi mashanu - uye avo vanhu vari kurodha mifananidzo, vachimhanya avo ega mablog, kutora chikamu mumaforamu… ivo vakanyatso kubatana!
Gumiguru 4, 2009 pa 9:56 AM
Ini ndiri pamusoro pe50 uye ndinoda wachi yangu wachi. Ndine bhizimusi remahara rePortfolio rekutambira bhizinesi asi ndinobvumirana naJim kuti anopfuura ma50s haana kugadzikana nehunyanzvi. Semudzidzisi muBusiness uye hazvo ndakarwa kwemakore nevadzidzi vekupasa kudzidza avo vasina kugadzikana nazvo kana. Tenda mwari weFacebook sezvo zvachinja mamiriro. Zvino ini ndinoti - unoshandisa Facebook here uye kana mhinduro iri hongu (izvo zvinowanzoitika) saka ndinoti zvakanaka unogona kushandisa blog, wiki, twitter kana chero imwe midhiya ipapo. Izvi zviri kutanga neanopfuura makumi mashanu emakore asi zvinononoka. Nyaya hombe yandinokurudzira kushandisa ePortfolio kushandiswa ndeyevadzidzisi, kwete vadzidzi. Ini ndaunza vadzidzi kuraira kwevadzidzisi uye iri kushanda chaizvo. Kudzidziswa uye kuvimbiswa ndiyo kiyi. Kutenda nekutumira. Zvido, Ian Knox
Sep 24, 2009 na1: 05 PM
Ini ndinobvumirana neako ese mapoinzi, kunze kweku, Isu TINOZIVA - Sevashambadziri, isu tinoziva zvakawanda pamusoro pemisika yedu nevatengi ipapo zvatakaita pasi pechinyakare maitiro, asi pachine kudikanwa kwekuturika uye kusvetuka kwekutenda mukushambadzira kwanhasi.
Sep 24, 2009 na2: 45 PM
Ehe, pamwe vangadai vakataura zviri nani 'Tinogona kuziva'. Ini ndinofunga mudzi ndewekuti isu hatichafanirwe kuita pane intuition chete. Nhasi isu BETTER tinoita tsvagiridzo kubatsira edu ekutengesa sarudzo!
Gumiguru 5, 2009 na3: 13 PM
Bvumirana newe Lorraine. Tinogona kuswedera padhuze ne "kuziva" nekuve neyakanakisa data kubva ku analytics Pane zvishoma zvekufungidzira zvinobatanidzwa. Mune dzimwe nzira, kushambadzira mumazuva epamberi epamhepo kwaive nyore nekuva nesarudzo shoma dzekufunga: TV, kupurinda midhiya, kushambadzira kwakananga kuburikidza netsamba & kukumbira foni. Ikozvino nesarudzo dzakawanda kwazvo dzekutengesa pamhepo, kunyanya kuve nemagariro enhau musanganiswa, sarudzo dzekushambadzira dzakatosiyana. Zvakadaro kumwe kufungidzira kunosanganisirwa nesarudzo dzisingaenzaniswi dzinokoka mukana pamwe nenjodzi.
Gumiguru 6, 2009 pa 6:09 AM
Haifanirwe kunge iri 'nyowani', asi zvakadii nezve Tinofunga> Isu Tinoyedza.